Kaominina Alasora Miandrandra vahaolana maharitra amin’ny lalankely noravana ireo mponina
Mbola mitohy ny disadisa eo amin’ny fokonolona sy ny tompon-tany iray eo amin’ny fokontany Ankazobe sy Ambohipo Atsimo. Ireo mponina hihazo an’Ankazobe, kaominina Alasora no velon-taraina fa ny toerana ahitana ilay lalankely kosa dia eo Ambohipo Atsimo.
Nisy nandrava io lalana io ka voatery mihodina lavitra ireo mpampiasa . Efa an-taonany maro anefa no nodiavina ilay fotodrafitrasa. Nohavaozin’ny “Sekalina” ka vita tamin’ny vato sy simenitra ary lasa “lalan’ny Sekalina” raha ny filazan’ireo mponina eny an-toerana. Indray zoma, tonga dia noravan’ny tompon’ny tany eo anilany ka tamin’izay no niatomboka ny korontana. Nilaza anefa ny tompon’andraikitra tamin’ireo fokontany roa tonta fa samy nilaza fa tsy nisy nanome alalana. Ny hany herin’ireo mpiandraikitra eo anivon’ny fokontany Ambohipo Atsimo aloha dia ny nanajanona ny asa. Tsy teo an-toerana koa ilay tompon’ny fanorenana fa mpiasa no teo ka tsy naha tapa-kevitra ireto farany.
Miandry ny raharaham-pihavanana ireo mpampiasa ny lalana, indrindra ireo mponinan’Ankazobe izay eo no fandalovana raha ho any Ankadindratombo. Raha tsy voalamina eo amin’ny manampahefana eo an-toerana dia hiakatra hatramin’ny raharaham-pitsarana mihitsy ity olan’ny “servitude de passage” ity. Tamin’ny fotoana nandalovan’ny mpanao gazety teny an-toerana, tsy tratra teo ilay tompon-toerana mikarakara fanorenana.